Ogaden News Agency (ONA) – Boris Johnson Xoghayihii Arimaha Dibada ee Britain oo Iscasilay.
Boris Johnson Xoghayihii Arimaha Dibada ee Britain oo Iscasilay.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa iscasilay iyadoo arrintana ay dhabar jab ku noqonayso dowlada ay madaxda ka tahay Theresa May iyadoo uu soo if baxay khilaaf ku saabsan ka bixitaanka Briatin ay ka baxayso Midowga Yurub (EU).
Is casilaada Johnson ayaa ku soo beegantay maalin uun kaddib markii uu is casilay David Davis wasiirkii u qaabilsanaa dowlada Ingiriiska ka bixitaanka EU. Afhayeen u hadlay Ra’iisul Wasaaraha Britain ayaa xaqiijiyay in uu is casilay xog-hayihii arrimaha dibada Boris Johnson.
“Galabta ayeey ra’iisul Wasaaraha aqbashay is casilaada Boris Johnson ee xilka Wasiirka Arrimaha Dibadda, bedelkiisana waxaa lagu dhowaaqi doonaa goordhow waana ugaga mahadcelineynaa howlihii uu soo qabtay,” ayaa lagu sheegay war ka soo baxay afhayeenka ra’iisul Wasaaraha Britain.